UPDATE: 425 ruux oo u dhimatay dalka Turkiga Fayraska Corona (COVID-19) – HalQaran.com
UPDATE: 425 ruux oo u dhimatay dalka Turkiga Fayraska Corona (COVID-19)
Turkey (Halqaran.com) – Wasaaradda caafimaadka Turkiga ayaa shaacisay in 70 qof ay tan iyo Jimcihii shalay ay u dhinteen Fayraska Corona, taasoo guud ahaan tirada dadka u dhintay ka dhigaya dalkaas 425 qof.
Fahrettin Koca oo ah wasiirka caafimaadka Turkiga, ayaa wariyayaasha u sheegay in illaa hadda la baaray 20,921 qof iyadoo 2,786 qof laga helay Fayraska Corona.
Wasiirka caafimaadka Turkiga, ayaa sheegay in 484 bukaan ah ay hadda ka soo bogsadeen xanuunka, waxaana xanuunka illaa hadda u jiifa isbitaalada 1,251 qof.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaaciyay in bandow lagu soo rogay dhammaan dadka da’dooda ay ka yertay 20 sanno, gaar ahaan magaalada Isbitanbul oo ah oo magaalo ay dadka ku badan yihiin.
Fayriska Corona (COVID-19), oo markii hore uu ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, ayaa waxaa uu gaaray ugu yaraan 181 waddan, waxaana u dhintay 60, 115 oo qof, halka hal Milyan oo qof uu guud ahaan ku dhacay xanuunka, sida ay shaacisay hay’adda WHO.
Tags: 425 ruux oo u dhimatay dalka Turkiga Fayraska Corona (COVID-19)
Xaasaska Askartii u geeriyootay difaaca dalka oo sheegay in mushaarkii laga jartay +(SAWIR)
Xafiiska QM ee Somaliya oo xaqiijiyay in ruux la shaqeeya laga helay Cudurka Corona (COVID-19)